Guddoomiyaha Gobolka Bakool oo kormeeray Fariisin cusub oo Ciidamada Xoogga ka sameysteen deegaanka Teed+Sawirro – Radio Muqdisho
Guddoomiyaha Gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tol iyo Wafdi uu horkacayo ayaa maanta kormeer ku sameeyay fariisimo cusub oo Ciidamada Xoogga dalka ka sameysteen deegaanka Teed oo qiyaastii 30-km dhanka Waqooyi kaga beegan magaalada Xudur ee xarunta Gobolka Bakool.
Intii ay Mas’uuliyiinta Gobolka Bakool kormeer ay ku jireen ayaa waxay la kulmeen Ciidamo ka tirsan Xoogga dalka oo iyagu diyaar u ah sugida Amniga iyo waliba dagaalka ka dhanka ah Kooxda Argagixisada Al-Shabaab.
Mas’uuliyiinta Kormeerka ku sameeyay fariisimaha cusub ee Ciidamada Xoogga dalka ay ka sameysteen deegaanka Teed ayaa mid mid u xog-wareystay Ciidamada,iyagoonka la kulmay Saraakiisha Ciidamada ku sugan deegaanka Teer ee Jiida hore ee Difaaca Ciidamada.
Guddoomiyaha magaalada Xudur ee Gobol Maxamed Macallim iyo Guddoomiyaha Gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tol ayaa si wadajir ah ciidamada Xoogga dalka ugu bogaadiyay sida geesinimada leh ee cadowga dalka uga difaacayaan,iyagoona ku dhiira geliyay iney intaasi ka sii laba jibaaraan.
Deegaanka Teed ee Gobolka wuxuu isku xiraa Gobollada Bakool iyo Hiiraan,waana deegaana muhiim ah oo ammaankiisa aad la isugu halleyn karo.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo kulan la qaatay Guddiga Difaaca Golaha Shacabka+Sawirro